मोहनपुर विद्यालयमा लायन्सकर्मीद्वारा सहयोग
By administrator on	 January 7, 2021 देश, फोटो फिचर, शिक्षा, स्थानीय, स्थानीय तह
पुस २३, चितवन । चितवनमा क्रियाशिल २ वटा लायन्स क्लबहरुले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच श्री आधारभुत बिद्यालय मोहनपुरमा अध्ययनरत बिद्यार्थीलाई स्वीटर बितरण गरेका छन् ।
विभिन्न सामाजिक तथा मानविय कार्य गर्दै आएका लायन्स क्लब अफ चितवन नवलपुर सम्बृद्धि र लायन्स क्लब अफ चितवन चौतारीले बिद्यालयमा अध्ययनरत १०० जना बिद्यार्थीहरुलाई स्वीटर बितरण गरेका हुन् । बिहिबार ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वीटर बितरण गरिएको कार्यक्रम संयोजक डा. शुसिल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १६ का वडा अध्यक्ष अमृतराज हमालले न्यून आय आएका अभिभावकका नानी बाबुहरु अध्ययन गर्ने बिद्यालयलाई छनोट गरी सहयोग गरेकोमा लायनहरुलाई धन्यवाद ब्यक्त गर्दै लायनहरुसँग अरु धेरै कार्यक्रम गर्न आफु ईच्छुक रहेको बताउनुभयो ।
लायन्स क्लब ईन्टरनेशनल डिष्ट्रिक ३२५ बि २ नेपालका प्रथम भाईस डिष्ट्रिक गर्भनर लायन रामप्रसाद भट्टले स्थानीय सरकारसँग मिलेर आफुहरुले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानिय स्तरबाट आवश्यकताको छनोट भएर आएको कामले परिणाम दिने भएकाले यस्ता काम गर्न पाउदा लायनहरुले गौरवको महसुस गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लायन्सका डिष्ट्रिक डिपार्टमेन्ट चिफहरु भक्तीप्रसाद चालिसे, भरत अधिकारी, एरिया नं ३ का चिफ एरिया को–अडिनेटर प्रभाकर पण्डित, एरिया नं ३ का एरिया सचिब पूर्णप्रसाद शर्मा, जोन चियर पर्सन बिनोद पन्त, लायन्स क्लब अफ चितवन चौतरीका अध्यक्ष डा. गंगा सापकोटाको उपस्थित थियो ।
त्यस्तैगरी श्री आधारभुत बिद्यालय मोहनपुरका बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद वली, निवर्तमान अध्यक्ष सुरबिर पोखरेल, पुर्व अध्यक्ष तील कुमारी गौतम, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक ईश्वरीप्रसाद दवाडी, शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष तुलबहादुर हमाल लगायतको दुबै लायन्स क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रम लायन्स क्लब अफ चितवन नवलपुर सम्बृद्धिका अध्यक्ष डा. भावना वाग्लेको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।
यस्तै बिहिबार नै लायन्स क्लब आफ नारायणगढ नारायणीले सोही बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने ५ जना बिद्यार्थीका लागि छात्रबृति स्वरुप लागि २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । त्यस्तै लायन रजनी मास्केले आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बिद्यालयको अक्षय कोषमा रहनेगरी ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
आज भन्दा ५२ बर्ष अगाडी स्थापना भएको बिद्यालयले बिहिबार बिबिध कार्यक्रम गरी आफ्नो ५३ औं स्थापना दिबस मनाएको छ ।